IBorrasca Fabien: yakhiwa kanjani, izici nomonakalo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Phakathi kweziphepho eziningi ezihlasele inhlonhlo yethu eminyakeni yamuva sinayo isiphepho Fabien. Kuyisiphepho esinegama lesithupha lesizini ka-2019-2020. Kuqale ngesexwayiso esisawolintshi ngenxa yokuvunguza komoya onamandla okhiqize izinto eziningi ezingasogwini eGalicia. Konke lokhu kwenzeke ngoDisemba 18 ngo-22: 30 ebusuku. Kamuva kwenziwa isaziso esibomvu futhi isiphepho sasakazekela oLwandle lwaseCantabrian.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana nesiphepho saseFabien, ukuthi saqala kanjani nokuthi yiziphi izici zaso.
1 Ukwakheka kwesiphepho uFabien
2 Izimo nezixwayiso zesiphepho uFabien
3 Imithelela emikhulu ebinayo eSpain
4 Izifundo zesiphepho
Ukwakheka kwesiphepho uFabien
Ukudlula kwalesi siphepho kwenza isifaca kulo lonke iBay of Biscay elibheke eFrance, kushesha impela. Singakusho lokho Ngamahora okuqala angama-22, konke ukukhubazeka kwakhe eSpain kwase kucishe kwaphela. Lesi sivunguvungu sakhiwa ngaphakathi kokugeleza okunamandla okukhulu futhi okunomswakama okweqa lonke i-Atlantic Ocean. Kungashiwo ukuthi kwakhiwa umfula osemkhathini owawugcwele imvula, le ndawo enomswakama omkhulu yayenze isiphepho i-Elsa kwaze kwaba yizinsuku ezimbalwa ezedlule.
Ukutholwa kwesiphepho uFabien kuqale ngomhla ka-19 ngo-18: 996 ntambama lapho kutholakala khona ukwehla kwengcindezi eningizimu yeNewfoundland ngaphansi nje kwe-24 hPa enkabeni yayo. Ngemuva kwamahora angama-18, ngo-20: XNUMX ntambama ngomhlaka XNUMX, isikhungo sesiphepho sase sivele sikhona maphakathi neNorth Atlantic futhi sasinokujula ngamanani we-970 hPa. Njengoba kungalindelwa, lokhu kwehla kwengcindezi kuzodala imimoya enamandla ehambisana nemvula.
Ngokuba nalomehluko wengcindezi, a i-cyclogenesis eqhumayo. Kusuka kulo mzuzu ukuthi yahamba ngokushesha yaya ngaseYurophu futhi yehlisa umfula osemkhathini. Isikhungo besilokhu siseduze nobubanzi obungu-45-50ºN. Kakade ngawo wonke ama-22, isiphepho uFabien sahlakazeka ngokuphelele eNetherlands naseDenmark.
Izimo nezixwayiso zesiphepho uFabien
Ntambama yangomhla zingama-21, kukhishwe isexwayiso esibomvu (ngomkhawulo ka-140 km / h) enyakatho yeCoruña naseLugo naseningizimu-ntshonalanga yezintaba zaseCantabrian e-Asturias, kwakhishwa isixwayiso se-orange weGalicia, i-Asturias, cishe yonke iCastilla y León. Uhlelo oluphakathi nezintaba zaseCastilla-La Mancha naseMpumalanga Andalusia (amanani aphakathi kuka-90 no-120 km / h, ngokusho kwemiphakathi ezimele), phakathi kuka-21 ntambama nango-22 engxenyeni yokuqala yosuku.
Mayelana nezehlakalo zasogwini, uLwandle iCantabrian kanye nogu lwe-Atlantic eGalicia kukhiphe isexwayiso esibomvu ngoba amandla omoya ukusuka entshonalanga kuya eningizimu-ntshonalanga yamandla 8-9, nasendaweni eyi-10, futhi ulwandle lwaphakama ngamamitha ayi-8-9 ukuphakama. Iningi lezinye izindawo ezisogwini lwasenhlonhlo naseziQhingini zaseBalearic likhiphe isexwayiso esiwolintshi ngezixwayiso ezingasogwini. Imvula bekungeyona into evelele kulesi siqephu, kepha yimimoya. Ngaphandle kwalokhu, ezinye izexwayiso ezingeni nezolintshi zikhishwe ngenxa yemvula enqwabelene emahoreni ayi-12 ngaphezulu kwama-80 mm, ikakhulukazi ezindaweni ezinezintaba esifundazweni sase-Albacete.
Imithelela emikhulu ebinayo eSpain
Lapho sesazi ukuthi lakhiwa kanjani nokuthi zazinjani izici zalo, sizobona ukuthi kwaba namiphi imithelela enhlonhlweni. Imiphumela evelele yesiphepho ibingenxa yamagagasi amakhulu athinte yonke indawo yaseGalicia nolwandle iCantabrian. Ngokuyinhloko amagagasi abangelwa ukuvunguza komoya okunamandla, kufaka phakathi iningi lazo iziphepho. Lezi zivunguvungu zomoya zithinte ingxenye enkulu yenhlonhlo, ikakhulukazi enyakatho ntshonalanga naseziQhingini zaseBalearic.
Ngokungafani nalokho okwenzeka ngesiphepho sangaphambilini u-Elsa, zazingekho izigameko zokufa ezazingahlanganiswa nokudlula kwesiphepho iFabien. Kodwa-ke, umonakalo wezinto ezibonakalayo wawubalulekile ezindaweni ezithinteke kakhulu. Yize imvula yenziwa yaba yinto evamile, irekhodi lokugcina lalesi siphepho elaba nalo lalingaphezu kwama-60mm emahoreni angama-24 ekukhishweni okuyinhloko kwe-AEMET. Irekhodi elithi Said latholakala eGrazalema lapho kwaqoqwa khona u-145.2 mm ngosuku lwama-21.
Ngokubheka ukuthi kusuka ngoDisemba 16 kuya ku-22 kwakukhona ukugeleza komoya okuqinile, okuswakeme kakhulu nokuqonde ngqo enhlonhlweni isonto lonke. Phakathi kwazo, izivunguvungu zikaDaniel, u-Elsa noFabián zenzeka ngokulandelana, futhi imvula enqwabelene yayinkulu.
Imiqondo yebhomu lesimo sezulu noma i-cyclogenesis eqhumayo akuyona into esungulwe ngabezindaba. Yimigomo ezelwe emphakathini wesayensi futhi enomlando omningi. Izangoma zezulu zaqala ukubhekisa kulezi zinhlobo zeziphepho ezinezichasiso ezifana neziqhumane noma amabizo, ezibiza ngamabhomu. Lo mqondo uphume esikoleni saseBergen eNorway, lapho obaba abasunguli besimo sezulu sanamuhla befundisa khona, futhi baba nesasasa lapho izazi zezulu ezimbili ezivela eMassachusetts Institute of Technology zikhuluma ngaso endabeni yango-1980. ukuchaza isivunguvungu esilahlekelwa ingcindezi engaphezu kwamamiligremu angama-24 ngosuku olulodwa, njengoFabien, oqokwe yi-State Meteorological Agency.
Ngokuguquka kwesimo sezulu, kucatshangwa ukuthi izexwayiso ezibomvu zezixwayiso zizoba nokuningi noma ngaphansi njalo eminyakeni emithathu kuye ngokuguquguquka kwesimo sezulu esizokucubungula lapho sitadisha izivunguvungu. Enye yezinto ukuthi okusivikelayo ensimini yethu kuyisiphepho se-Azores. It is a anticyclone enkulu eyeka lonke usizo lwesiphepho. Eqinisweni, bekuyinto ebangela ukuqeda lesi siphepho kusukela ngomhlaka 22.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngesiphepho saseFabien, imvelaphi yaso kanye nezici zaso.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » I-squall Fabien